अभिनेत्री प्रियंका कार्की आमा बन्ने भएकी छन, सामाजिक संजालमा बेबी बम्ब देखाउदै यस्तो लेखिन् ! हेर्नुहोस् (फोटो सहित) – SUDUR MEDIA
April 2, 2021 AdminLeaveaComment on अभिनेत्री प्रियंका कार्की आमा बन्ने भएकी छन, सामाजिक संजालमा बेबी बम्ब देखाउदै यस्तो लेखिन् ! हेर्नुहोस् (फोटो सहित)
चर्चित अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले आफु गर्भवती भएको तस्बिर सामाजिक संजालमा सार्वजनिक गरेकी छिन् ।
प्रियंका कार्कीले आफ्नो पति आयुष्मान देशराज जोशीसँगै गर्भवती भएको तस्बिर सार्वजनिक गरेकी हुन् । सार्बजनिक तस्विरमा अभिनेत्री कार्कीको बेबी बम्ब स्पष्ट देख्न सकिन्छ । सामाजिक संजाल फेसबुकमा राखिएको तस्विरसँगै अभिनेत्री कार्कीले लेखेकी छिन् – ‘तपाईंहरुले अब सोध्न रोक्न सक्नुहुन्छ, हजुर, हामी गर्भवती भएका छौं ।’
यो पनि हेर्नुहोस्: टिकटकमा चर्चित रहेकी निता सुनारको पहिलो म्युजिक भिडियो सार्बजनिक (भिडियो सहित) ! टिकटकमा चर्चित रहेकी निता सुनारको पहिलो म्युजिक भिडियो रिलिज भएको छ । प्रविन बज्राचार्यको स्वरमा रहेको ‘नक्कली केटी’ बोलको गीतमा निताले अभियन गरेकी छन् ।
ओम शंकर श्रेष्ठको शब्द रहेको गीतको भिडियोलाई शैलेक्द्र खोखालीले निर्देशन गरेका हुन् । युट्युब च्यानल हाइलाइट्स नेपाल मार्फत सार्वजनिक भएको भिडियाको सम्पादन निर्देशक आफैले गरेका छन् । पोखराकी निता म्युजिक भिडियोमा बोल्ड अवतारमा देखिएकी छन् ।
राष्ट्रपतिको हातबाट भव्य तरिकाले भयो मेलम्चीको पानी उद्घाटन ,प्रधानमन्त्रीले गित गाउन खोज्दा बिर्सिएर हैरान ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
अ’पह’रणमा परेकी भनिएकी चितवनकी सुजिता भण्डारीको ९ दिन पछी आज जंगलमा लहरामा अल्झिएको अवस्थामा श’व फेला ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल जेठ ०६ गते बिहीबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ मे २० तारिख…..